Ọrụ - Shenzhen Lantaisi Technology Co., Ltd.
Anyị nwere ike ịnye ndị ahịa anyị ọrụ OEM. Ruo ugbu a, anyị emeela ọtụtụ mmepụta ihe maka ụdị ngwaahịa 20, nke a na-emepụta na nzuzo maka ahịa. Ọ bụrụ na-amasị gị ụdị na ike ịtụ kacha nta ka ibu, anyị nwere ike ime OEM imekọ ihe ọnụ. Anyị ga-ebipụta LOGO gị akọwapụtara na ngwaahịa, ngwugwu na akwụkwọ ntuziaka, wdg.
Anyị nwere R & D nọọrọ onwe ya na ikike imewe, ma nwee ike chepụta ụdị ngwaahịa dị iche iche. Ọ bụrụ na ị nwere echiche nke gị maka ụdị ngwaahịa, anyị nwere ike gbanwee ọdịdị ma ọ bụ nhazi nke ngwaahịa ahụ. Anyị nwere ikike ịmepụta ngwaahịa pụrụ iche dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị iji hụ na ngwaahịa dị iche iche na ihe ire ere pụrụ iche. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụdị buru ibu na ndị a ma ama emeela nkwado ODM na anyị, ndị ahịa achọpụtala R & D na ikike imewe otu olu.
Nabata ọtụtụ ndị ahịa ka ha na anyị na-arụkọ ọrụ na ọrụ ODM.
Usoro ngwugwu anọpụ iche
Anyị na-anabatakwa iwu maka obere ngwugwu na-anọpụ iche. Ọ bụrụ na ị na-amalite ire ngwaahịa chaja ikuku ma ọ bụ na-amalite ịkwado anyị na nke mbụ. Ị nwere ike ịchọrọ usoro ikpe nke otu narị nkeji ma ọ bụ abụọ ma ọ bụ narị atọ. Na nzaghachi maka ọchịchọ a, anyị na-akwado ka ị mee obere iwu na nkwakọ ngwaahịa na-anọpụ iche, na-enweghị ibipụta LOGO na ngwaahịa na ngwugwu, ọ dịghịkwa ihe dị iche iche maka ngwugwu.
Yabụ ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ a, a na-anabata gị ka ị kwadoo anyị maka iwu nkwakọ ngwaahịa na-anọpụ iche. Anyị ga-enye gị ngwaahịa ndị tozuru oke.
PCBA imekọ ihe ọnụ
Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ọrụ shei gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ shei na-arụkọ ọrụ, mana ịchọrọ ka anyị nye PCBA n'ime. Anyị nwere ike ịnye gị PCBA dị iche. Ị nwere ike ikpokọta na n'ikpeazụ nwalee ngwaahịa na gị shei factory. Ndị injinia anyị mere PCBA, yana ikike ikike ọgụgụ isi nwere onwe yana arụmọrụ tozuru oke. Ebugoro ọtụtụ narị puku PCBA na ndị ahịa ugbu a.
Mmadụ Bịa ime PCBA imekọ ihe ọnụ na anyị, anyị ga-enye ndị kasị pụrụ ịdabere na na kwụsiri ike PCBA gị, daalụ.